Varwere Voshaya Anorapa muZvipata zveHurumende Vakoti naVanaChiremba Vachiramwa Mabasa
Vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navanachiremba vasvika mazuva makumi matatu nematatu vakanda mapadza pasi vachiti mari yavari kutambiriswa haichakwani kuti vaende kumabasa pasina kana tarisiro yekuti dambudziko iri richagadziriswa.
Zvinhu muzvipatara zvehurumende zvabva zvaita manyama amire nerongo zvopa kuti vamwe varwere vadzoserwe kumba vasina kurapwa.
Zvinhu muzvipatara zviri kutarisirwa kutonyanyoipa sezvo sangano ravanachiremba vakuru reSenior Health Doctors Association vakatozivisa kuti kana nyaya dzemari nekuramwa mabasa kwavanachiremba vadiki nevakati dzikasagadziriswa naivo vachapindawo mukuramwa mabasa. Mutauriri wesangano ravanachiremba vakuru iri Dr Aaron Musara vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara.
Dr Musara vanoti kunyangwe hazvo vakazivisa hurumende nezvedanho ravo rekuda kukanda mapadza pasi kuburikidza nemagwaro avakanyorera mapazi akasiyana siyana hapana mhinduro yavati vawana.
Vanamukoti muzvipatara zvehurumende havasi kuenda kumabasa uye vari kuda kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica yavaitambira muna Gumiguru 2018 pamwe nekuvapa zvekushandisa kuzvidzivirira kubva kuzvirwere kana vari pamabasa.
Mutungamiri wesangano rinomirira vanamukoti reZimbabwe Nurses Association, ZINA VaEnock Dongo vanoti hurukuro nehurumende kutungana kwembudzi.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA Dr Tapiwa Mungofa vatiwo kusagadziriswa kwenyaya dzevashandi vezvehutano nehurumende kwave kusiya varwere vasina anovarapa.
VaMungofa vatiwo panguva iyo vana mukoti vakaramwa mabasa dzimwe nhengo dzavo dzakawanda dzave kumba senzira yekudzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 inonzi pachirungu Self quarantine.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vezvehutano sezvo vakafanobata chigaro chagurukota rezvehutano Muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadaviri nharembozha yavo.
Asi vhiki rapera, VaMurwira vakazivisa kuti vanga vatanga hurukuro nana mukoti. Mutevedzeri wavo VaJohn Mangwiro vaudzawo Studio 7 kuti vanga vakabatikana nekudaro vange vasingakwanise kutaura.
Sachigaro weHealth Services Board, Dr. Paulinus Sikosana, vatiwo vange vari mumusangano unechekuita nedenda reCOVID-19 nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu.
Nyanzvi dzezvehutano dzinotiwo kana hurumende ikasagadzirisa nyaya yevakoti kuti vadzokere kumabasa uyewo kudzivirira vana chiremba kuti vasaenderera mberi kuzvigokera moto muziso kunyanya panguva ino nyika yakatarisana nedenda reCOVID-19 iro rauraya vanhu makumi maviri nevashanu kusvika parizvino.